Indlu yezihambi yomndeni eTabay enokubukwa kwezintaba
Tabay, Mérida, i-Venezuela
Ikamelo e-ifulethi elisevisiwe ibungazwe ngu-Edith
Solar de los Abuelos iyindawo yakhelwe ukuba ujatshulelwe nokungcebeleka amaqembu umndeni ivakashele kule ndawo kanye nabahamba njalo abafuna ukuzizwa ekhululekile sengathi emzini wabo, ngokungafani ukuthi yezihambi zethu Uyobe uzungezwe izintaba ezikhangayo imilingo esinikezwa yisifunda sase-Andean saseMérida. Siyikhaya lakho, kude nekhaya.
Indawo ekahle ongabelana ngayo nabangani nomndeni, ngemuva kokuhamba isikhathi eside endaweni, lapho ukuphumula kubalulekile. Lapho, zonke izivakashi zethu zizoba nokuzimela okuphelele kokupheka nokusebenzisa isikhathi esiseqophelweni eliphezulu.
I-Tabay iyidolobha elihle e-Andes yaseVenezuela, esemgwaqweni omkhulu iTrasandina ofinyelela ezindaweni eziphakeme kakhulu eVenezuela. Endaweni eyizungezile kuneLa Mucuy Park, eyingxenye yeSierra Nevada National Park, nayo ezungezwe iPico Bolívar edumile. Ukuthengiswa kwamakhekhe ase-Andean, i-Plaza Bolívar, ingoma encane kanye nobungane babantu bayo izici zayo ezinkulu kakhulu. Indawo yethu yezihambi ikwenye yezindlela ezi-2 ezimaphakathi kakhulu zendawo, izitebhisi ezingaphezu kwesikwele esimaphakathi nendawo, indawo yokuhlangana yabahlali kanye nezivakashi.
Siyakunakekela ukukhombisa izinsiza kubavakashi bethu, kanye nokuqinisekisa ukufakwa kwazo. Bese, sivakashela indawo ngezikhathi ezithile noma uma izivakashi zikudinga.